बाबुराम भट्टराईको चित्र र चरित्र उनकै बोलीमा « Nepal Bahas
बाबुराम भट्टराईको चित्र र चरित्र उनकै बोलीमा
शहरमा जसको चर्चा छ:-
प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १२:०५
मेरो खास नाम बाबुराम होइन मुक्तिनाथ भट्टराई हो । मभन्दा माथिको दाजु सानैमा बितेपछि जन्मेको म पनि बाँच्दिन होला भनेर बा–आमालाई ठूलो चिन्ता लागेछ र मलाई न्वारानको नामभन्दा प्यारो गरेर बोलाउने नाम दिनुभएछ ‘बाबुराम’ । पछि विद्यालयमा भर्ना हुँदा नामको कुरा आयो । नाम लेख्ने गुरूले भनिदिनु भयो तिमीलाई त बाबुराम भन्न नै राम्रो लाग्छ नि, यही नाम चलाउ । त्यसपछि म बाबुराम भएको हूँ । पार्टीको ‘टेक नेम’ चाहिँ ‘लालध्वज’ हो । टोपी लगाएको यो मेरो फोटो एस.एल.सी. परिक्षा पास गरेको बेलाको हो । त्यो बेलासम्म मेरो खुट्टामा जुत्ता हुँदैनथ्यो आमा धर्माकुमारी महान जनयुद्धमा म भूमिगत रहेकै बेलामा बित्नुभयो, बा भोजराज मैसँग हुनुहुन्छ । आमा हठी र अलि रुखो स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो । बाचाहिँ अन्तर्मुखी र मितभाषी । त्यसैले उहाँहरू दुबैको स्वभाव उत्तरदानका रुपमा मैले पाएको छु । मेरो एउटा भाई छ शिब । ऊ विद्युत प्राधिकरणमा जागिरे छ । मसँग उसको अनुहार काटीकुटी सबै मिल्ने भएको हुनाले हाम्रो गौरबशाली पार्टीको महान जनयुद्धकालमा उसलाई प्रहरीले धेरैपटक यातना दियो । यसरी उसले हाम्रो महान जनयुद्धलाई योगदान पु¥याएको मान्नुपर्छ ।
मार्क्सवाद र म :- आजको विश्व स्टालिनवादीभन्दा पनि अलि बढी ट्राट्स्कीवादी बन्दै गएको तथ्यलाई आजका मार्क्सवादहरूले मनन गर्नैपर्छ ।……धर्मशास्त्रलाई झैं एकोहोरो महिमा मण्डन गरेर वा एकसय आठ पण्डितको सामुहिक पाठ गराएर माक्र्सवादको विकास र समृद्धीकरण हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्या छ । म सिद्धान्त र ब्यवहार दुबैमा मार्क्सवाद हुँ । गान्धीवादी दर्शनले एउटा गालामा हाने अर्को गालामा पनि हान भनेर गाला थाप्छ, तर मार्क्सवाद भनेको जस्तालाई तस्तै गर्ने हो । यसबाट प्रभावित भएको मभित्र आफुलाई कसैले अन्याय ग¥यो भने त्यसको न्याय आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने इखले बदलाको भावना भरिदिएको छ ।
माओवादीबारे :- पार्टीमा मेरो विचारले काम गरिरहेको छ, तर मलाई निरन्तर सांगठनिक हिसाबले कमजोर बनाउने काम भैराख्या छ । चुनवाङ् बैठकदेखि बाह्रबुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि आजका दिनसम्म मेरै लाइन पास भइरहेको छ । हिसिला भन्नुहुन्छ, पार्टीमा तिम्रो विचार चाहिने तिमी नचाहिने ? म भन्छु यो कुरा तपाई पार्टीका कार्यक्रममा राख्नुस् न ! हाम्रो पार्टीमा नवमण्डले प्रवृत्तिको घुसपैठ भएको छ । नाइजेल काल्डरको यो भनाई हामीलाई पनि लाग्या छ— पार्टी जब प्राधिकारको नियन्त्रणमा पुग्छ, तब विज्ञानको मृत्यु हुन्छ । आफ्ना गुरूहरूको खण्डन गर्न तयार रहने युवा व्यक्तिहरूको निरन्तर प्रवाहले मात्र यसलाई जीवित राख्नसक्छ । तर म पार्टी छोडेर वा फुटाएर हिँड्दिन ।
प्रचण्ड र किरणसँगको सम्बन्ध :- युद्धकालमा कमरेड प्रचण्ड र म एकसाथ हिँड्यौं । खतरैखतराका बीच जनताका बिकट बस्ती र छाप्रासम्म हाम्रो सहयात्रा दृढ निश्चय र स्पष्ट लक्ष्यका साथ चलेको हो । तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको राजनीतिमा कमरेड प्रचण्ड पीँधबिनाको लोटाजस्तो देखिनुभयो । वैद्य कमरेड उन्नाइसौं शताब्दीको कम्युनिष्ट हुनखोज्ने, छोइछिटो बार्ने कट्टर बाहुनजस्तो जडसूत्रवादी, ओल्ड् मोडेलको । यसरी एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा नेतृत्व दिन सकिँदैन ।
प्रचण्डलाई पहिले देवत्वकरण गर्ने कमरेड किरण नै हुनुहुन्छ, जो अहिले त्यसैगरी राक्षसीकरण गर्दै हुनुहुन्छ । यस्तो अति पूजा र अति घृणा दुबै अतिवादका द्योतक हुन् भन्ने हामीलाई लाग्या छ । बाहिर के भ्रम छरियो भने कमरेड किरण र प्रचण्डकाबीच गुरु–चेलाको जस्तो सम्बन्ध छ, प्रचण्डले किरणलाई गुरूको रुपमा आदर गर्नुहुन्छ । त्यो भ्रामक कुरा हो । जनयुद्ध शुरू हुनुभन्दा एक वर्षअघि ०५१ फागुनमा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित बैठकको पूर्वसन्ध्यामा ‘जनयुद्धको विकास, धक्का र छलाङ्को रूपमा कि क्रमिक विकासका आधारमा ?’ भन्ने सवालमा किरण र प्रचण्डबीच निकै भनाभन भयो ।
मैले प्रचण्डको प्रस्ताबलाई ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा मानेँ, ‘ग्रामीण वर्गसंघर्षको विकास’ का लागि बादलको उच्चमूल्याङ्कन गरे, तर कमरेड किरण र कमरेड प्रचण्डका बीच कालिङपोङ (भारत) को एउटा होटलमा झगडा हुँदा छुट्याउनलाई झन्डै प्रहरी बोलाउनु परेको थियो । त्यो आलोचनात्मक सम्बन्धकै कारण आखिर पार्टी फुट्यो ।
नेपाल राष्ट्र :- यो राष्ट्र पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाइमा खडा गरेको कुरामा हामीले बहस गर्नुछैन, तर उनले किन खडा गरेका थिए भन्नेमा हाम्रो आफ्नै बहस छ । तपाईहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ नेपालको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम । संघीयताका बारेमा छिमेकीहरूले बोलिसके । म प्रधानमन्त्री छँदा मूख्यसचिव नियुक्तिमा समेत केके भयो, त्यो जगजाहेरै छ (भारतले मधेशीलाई बनाउन हस्तक्षेप गरेको थियो—सं.) ।
खासमा यो मुलुकको चाबी अन्तै रहेछ, त्यसैले सोचेजस्तो गर्न नसकिने रहेछ । उत्तरको छिमेकी चीन हाम्रै जमानामा महाशक्ति राष्ट्र हुँदैछ । भारत पनि त्यसैगरी उन्नती गर्दैछ । बीचको यो नेपालले आफ्नो प्रगति गर्न सकेन भने एकातिर मर्ज हुनुपर्छ । मैले सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटीमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र ‘नेपालको द्वन्द्वोत्तर पुनःसंचना : चुनौती र सम्भावना’ मा भनेको त हो — एउटा छिमेकीलाई चिढ्याएर अर्कोसित लहसिने कुनैपनि विदेश नीति नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । तर बाहिर बसेर भन्नु र सत्ता चलाउनुमा बिल्कुल फरक रहेछ । २०५२ साल माघमा हामीले तत्कालीन कांग्रेसी नेतृत्वको सरकारसमक्ष पेश गरेका ४० सूत्रीय माग र त्यसको शिरानका ७ वटा नेपाल–भारत सम्बन्धका मागलाई उचालेर फुटेर गएका साथीहरूले ‘मियाँ के जुते मियाँ की सर’ गरिरहेका छन् । ती मागले आज मलाई निरूत्तर बनाइरहेको साँचो हो । तर म ती मागको भावनाबाट बाहिर छैन ।
हामी नेपालको राज्यसंरचना बदल्न प्रतिबद्ध छौँ । म त फेरि भन्छु, वर्तमान राज्यलाई टुक्राटुक्रा पारेर नयाँ राज्य स्थापना गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो’ (Our ultimate goal is to overthrow the old state replacing it withanew one. …In our case it has meant cutting up the state part by part, in fact we are devouring it part by part….) ।
सत्ता र प्रधानमन्त्री पद :- प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो पार्टीभित्रबाट मलाई खासै सहयोग भएन, खुट्टा तान्ने काम भयो । कमरेड प्रचण्डका मबिरूद्धका खेललाई पनि मैले हेरिरहेको छु । यसको म उहाँहरूले बोल्नै नसक्ने गरी जवाफ दिनेछु । म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति भारत गएर मेराबिरूद्ध लबिङ गरेर आएछन् । त्यो थाहा पाएपछि भन्नैप¥यो, गोली खान तयार छु, तर पदबाट हट्दिन । किनकि म संविधानसभा संसदबाट बकायदा निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, मैले षड्यन्त्रपूर्वक हट्नु थिएन । संविधानतः मलाई कसैले हटाउन मिल्दैनथ्यो ।
मैले ठेगान नभएका र चरित्र भत्केका मधेशीहरूलाई पनि लिएर सत्ता चलाउनु परेको थियो । धेरैजसोलाई त म चिन्दा पनि चिन्दिनथेँ । मैले भनेँ हूँला, काम गर्न नपाए एक मिनेट पनि पदमा बस्दिन, म जतिन्जेल बस्छु देश र जनताकै पक्षमा काम गर्छु । तर मैले भनेरमात्र के गर्ने ? मेरा हातखुट्टा बाँधेर केही गर्न नदिई कुर्सीमा राखिएको थियो । मैले त्रिभुवनको शालिक शहिद गेटबाट झिकेर नारायणहिटीमा लगेर राख्न खोजेँ, सर्वोच्च अदालतले रोक्यो । अदालतले पनि मलाई काम गर्न दिएन । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरेर असहयोग नै गरिदिए । भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउन नसक्नु त छँदैथियो, अब त भ्रष्टाचारीले हामीलाई नै सिध्याउलान् जस्तो भइसक्यो ।
मैले भारत भ्रमणका बेला लगानी संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता (बिप्पा) गरेको हो । मलाई भारतीय समकक्षी (डा. मनमोहन सिंह) सम्झाउँदै थिए, यदि सम्झौता गर्दा तपाईलाई अप्ठ्यारो आईलाग्छ भने केही छैन, नगर्नुहोस् । तर मैले यसमा जुवा खेलेँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत अन्य १५ वटा बिमानस्थलहरूको व्यवस्थापन जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने कामको प्रारम्भचाहिँ माधवकुमार नेपालकै पालामा भएको हो ।
मैले सत्ता छोड्नुपर्छ भने सुशील कोइरालालाई होइन, स्वतन्त्र व्यक्ति वा हाम्रो सत्ता समीकरणका मित्रहरूलाई छोड्न सकिन्छ भनेको हुँ । सुशील कोइराला संघीयता विरोधी हुन् र कांग्रेस यथास्थितिवादी शक्ति हो । कांग्रेस र एमाले मेरो नेतृत्वको सरकारलाई कुनै हालतमा मान्न चाहँदैनन् भने मैले कांग्रेसको नेतृत्व मान्न किन पद छोड्ने ? कांग्रेस पार्टीबाट आएका राष्ट्रपतिमाथि कांग्रेसलाई नै प्रधानमन्त्री पद दिँदा प्राप्त उपलब्धिहरू खतरामा पर्ने जोखिम पनि थियो ।
भारतसँगको सम्बन्ध:- मैले भारतमै उच्चशिक्षा हासिल गरेँ । नेपालमा बोर्डफस्र्ट भएर आएको भन्ने हैसियतले पनि ममाथि अलि ध्यान दिएर हेर्न थालियो । ‘रअ’ का अधिकारी हर्मिस थराकानको गृहराज्य केरालामा बस्दा उनीसँग घनिष्टता भयो । प्रा. सुखदेव (एस्. डी.) मुनीसँग त्यसैबेला देखिको सम्बन्ध हो । विद्यार्थीकालमा राजनीतिक गतिविधिमा सरिक भएकोले पनि सबैसँग चिनजानी भयो । राजा वीरेन्द्र भारत भ्रमणमा गएको बेला कालोझण्डा देखाउने मै थिएँ । त्यसले त भारतीयहरूलाई भन्नचाहिँ नहुने गरी भित्रभित्रै गद्दगद बनाएछ । त्यसले पनि मलाई इन्डियामा बसेर राजनीतिक गतिविधि गर्न हौस्याएको हो । भारतसँगको सम्बन्धको जग त्यही हो ।
राजतन्त्रकालमा नारायणहिटी राजदरबारले जुन शक्ति चलाउँथ्यो, राजतन्त्र ढलेपछि नेपालमा नयाँदिल्ली र लैनचौरले त्यही शक्ति चलाइरहेका छन् । आज नेपालमा भारतमात्र होइन, विभिन्न विदेशी शक्तिहरू चलखेल गरिरहेका छन् ।
र याे पनि…पार्टी फेरेर वा फोरेर जुटेका यादव, भट्टराई र राईको संयुक्त भान्सा
म मुलुकको प्रधानमन्त्रीसम्म भएँ । तर मैले यो पद सम्हाल्दा छवि बलिदान गर्नुप¥यो । मैले कुनै त्यस्तो गल्ती गरेको छैन, जुन भविष्यमा सच्याउन नसकियोस् । मैले पार्टीको उपाध्यक्ष पद छोडेकोलाई पनि नानाथरि चर्चा गरियो । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने तयारीको रुपमा अर्थ लगाइयो । तर मैले पदमा नबसी पार्टीको एउटा इमानदार सिपाही भएर काम गरिरहनका लागि यो अठोट लिएको हुँ । युवाहरूलाई अवसर र स्थान दिनका लागि मेरो पदत्याग हो ।
(यो सामग्री डा. भट्टराईले विभिन्न कार्यक्रम र सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई समेटेर तयार गरिएको हो ।)